Gingde blọgụ maka Mwakpo: Otu esi amalite Blog nke nama na 2020
09.05.2020 Category: Geen categorie
Everchọtụla ịmalite blọgụ nke gị? Ma ọ bụ, al nweela blog ị na-ejighi n’aka etu ị ga-esi ruo ọkwa nke ọzọ?
Ọ bụrụ na azịza gị bụ "ee" mgbe ahụ peeji a bụ ebe ị kwesịrị ịdị.
0.0.1 N’ime ntuziaka ịde blọgụ, ị ga-amụta:
0.0.2 Gini kpatara ndu a? Obere ihe gbasara onwe m
1 Isi nke 1. tingtọlite ​​Blog na Scratch
1.1 1. Họrọ ezigbo webhost na aha ngalaba
1.1.1 Aha ngalaba – Ebee debanye aha?
1.1.2 Bochum Weebụ – Ebee ka a ga-esi wezie Blog gị
1.1.3 Akwadoro Blog nke akwadoro maka Nieuwkomers
1.2 2. Gosiputa ngalaba DNS n’ebe onye web gị nọ
1.3 3. W WordPressnye WordPress na webhost gị
1.3.1 Ntinye akwụkwọ ntuziaka WordPress
1.3.2 Zie WordPress Otu Pịa
1.4 4. Chọta Peeji WordPress Admin gị ma banye
1.5 2. Kwụsị WordPress Gburugburu klọb
1.5.1 mara Gburugburu
1.5.2 Ihe eji eme ihe
1.5.3 Ngwa mgbakwunye maka arụmọrụ blog kachasị mma
1.5.4 Ngwa ndọkụrịta maka Gutenberg
2 Isi nke 4. ingchọta Niche na ingmepụta Ọdịnaya
2.1 Otu esi ahọrọ niche ọde blọgụ ziri ezi?
2.1.1 1. Mejupụta mkpa
2.1.2 2. Ihe ị chọrọ
2.1.3 3. Isiokwu was ike ịnọgigide
2.1.4 4. Uru
3 Isi nke ise 5. Growtọ Blog
3.1 1. Dee ihe ndi mmadu choro iguta
3.2 2. Soro ndi obodo gi
3.3 3. Gbalịa mee ka blog gị dị mfe ọgụgụ
3.4 4. Ikwu-blog
3.5 5. Ajụjụ-platform Q&EEN
4 Isi nke 7. Iji Blogde blọgụ Efu
4.2 Edezi eserese
4.3 Foto Foto na Foto Onwere Onwe
4.4 Ntuziaka & nyocha
4.5 Sociale media, Ahịa & SEO
4.6 Nchịkọta Ntanetị & Nrụpụta Weebụ
4.7 Nnwale Ọgba Weebụ
5 De blọgụ ugboro ugboro
N’ime ntuziaka ịde blọgụ, ị ga-amụta:
Gini kpatara ndu a? Obere ihe gbasara onwe m
Ezubere M Bochum Nzuzo Wepụta (WHSR) na 2008, na ekele akụkụ nke nnabata nnabata ịde blọgụ anyị ji ike gaa ike. Kemgbe ahụ, WHSR etolitela ghọrọ otu n’ime saịtị ndị isi na Net maka ndụmọdụ ntanetị, ma adọtala m ka ha mata ụfọdụ olu siri ike na ịde blọgụ nke oge a – ha niile azụrụla nt” aka aka aka aka aka , na-eme ọ bụ ihe a ga-eji nweta onye ọ bụla nke na-ebido ịga ebe ịde blọgụ nke onwe.
Site na ntuziaka enweghị nzuzu a, m ga – ewetara gị ụfọdụ ngwa ngwa, nghọta dị mfe nghọta na karịa ụzọ dị mma maka nsogbu ịde blọgụ gị – sitere na ahụmịhe nke m-n-mm.
My ode akwụkwọ profaịlụ na Problogger.net – M na-ebipụta oge niile na ọtụtụ saịtị ndu blogger dị elu n’etiti 2015-2018.
Isi nke 1. tingtọlite ​​Blog na Scratch
Ọ dị mfe ma dịkwa ọnụ ala ịmalite blọgụ na 2020.
Akụrụngwa ịde blọgụ kachasị ewu ewu, WordPress.org, bụ n’efu. Achkacha amara emepe emepe WordPress na plug-ins bụ n’efu. Ma enwere ọtụtụ nde nkuzi n’efu na-amalite gị (gụnyere nke a). Naanị ihe ị ga – eri bụ itemalite blọọgụ bụ ego ị na – akwụ maka onye webụsaịtị na aha ngalaba.
O doro anya, w nwere ike nweta oke aghụghọ na emesịa ogbo; mana n’otu mgbe, ọde blọgụ nwere ike ime onye ọ bụla nwere kọmputa na Internetntanetị. N’ezie ị nwere ike ịmepụta blog n’ezie ma mee ka ọ na-agba ọsọ na nkeji 20 na-esote. Nzọụkwụ ndị a kpọtụrụ aha na usoro ndị a bụ kpọmkwem otu m si emepụta blọọgụ m na mbido.
Ihe ị ga – eme bụ:
Họrọ ezigbo webhost na aha ngalaba
Gosipụta ngalaba ngalaba DNS op een na – elekọta weebụ gị
W WordPressnye WordPress na webhost gị ọhụụ (dị mfe iji ihe nrụnye akpaaka).
Banye op WordPress gi ma bipute post mbu gi.
Ma… nke ahụ niile.
Easyda mfe? Zet nzọ in!
M ga-eje ije gị n’okpuru ebe a. Na-eche gratis iji ọ bụrụ na ị marala etu esi ahazi blog nke gị.
1. Họrọ ezigbo webhost na aha ngalaba
IJi bido blog gbara onwe gị, ị ga-ebu ụzọ chgalgalaba aha na akaụntụ nnabata web.
Ngalaba gị bụ aha blog gị. Ọ bụghị ihe anụ ahụ ị nwere ike imetụ ma ọ bụ hụ; kama ọ bụ ụdị mkpụrụedemede na-enye weebụsaịtị gị aka ịmata – dị ka aha akwụkwọ ma ọ bụ ebe. Ngalaba gị na – agwa ‘ndị ọbịa’ ụdị blog ha na – eleta.
Nlekọta weebụ, n’aka nke ọzọ, bụ ebe ị na-echekwa ọdịnaya blog gị – okwu, isiokwu blog, onyonyo, vidiyo, na ndị ọzọ.
Aha ngalaba – Ebee debanye aha?
Je bent net als ịhọrọ ma denye aha ngalaba gị site na ngalaba na-edeba aha. GoDaddy, AhaCheap, Hover, na Domain.com bụ ụfọdụ n’ime ndị na – edebanye aha ndị ama ama na ahịa.
Rịba ama na ọ dị mkpa ịdebanye aha ngalaba na onye na-elekọta weebụ gị. Naanị n’ihi na onye na-elekọta weebụ gị na-enye ngalaba n’efu anaghị apụta na ị kwesịrị ikwe ka ụlọ ọrụ Bochum na-achịkwa aha ngalaba gị. Onwe m, ana m eji NameCheap jikwaa aha ndebanye aha ngalaba m; mana ndị ọzọ na-edeba aha ngalaba aha kwesịrị ịdị mma. Site n’ime nke a, enwere m ike ịgbanwe ngalaba ngalaba DNS m oge ọ bụla achọrọ m ma zere ịbụ onye akpọchiri m otu webhost otu. Ana m akwadosi gị ike ime otu ihe ahụ maka nchebe gị.
Bochum Weebụ – Ebee ka a ga-esi wezie Blog gị
Banyere ntanetị weebụ, lelee nke m họta weebụ kachasị mma na ndebanye nyocha nyocha.
Maka ndị mbido, m na-akwado ịmalite obere na onye ọbịa weebụ na-ekerịta.
Na ntinye nnabata – Ọ bụ ezie na nchịkwa nnabata dị ntakịrị ma e jiri ya tụnyere ndị ọzọ (VPS, igwe ojii, wdg), ị ga-achọ obere ego (oge <$ 5 / mo na ndebanye) na ihe ọmụma ọrụ iji malite. Mgbe ị na-ahọrọ onye ọbịa weebụ maka blog gị, ihe ndị a bụ ihe ise ga-echebara echiche:
pụrụ ịdabere – Blọọgụ gị kwesịrị iguzosi ike ma dị n’ịntanetị 24 × 7.
Snelheid – needchọrọ onye nnabata nke na – ebu ngwa ngwa n’ihi na ọsọ na-emetụta ahụmịhe onye ọrụ na ogo ọchụchọ.
Yenye ọnụahịa – Bochum na <$ 5 / mo bu ezigbo mmalite, ichoghi oru ego di elu na ogbo a.
Ime ụlọ na-eto – will ga – achọ nkwalite ndị ọbịa (atụmatụ ndị ọzọ, ikike sava ndị ọzọ, wdg) ka blọọgụ gị na – eto.
nkwado – Thentanetị na-agbanwe agbanwe mgbe niile, ọ dị mma mgbe niile ịnwe onye nyere gị nkwado n’akụkụ ọrụaka.
Akwadoro Blog nke akwadoro maka Nieuwkomers
1. Enwe Mmasị
Nog geen tijd met InMotion Bochum verdien $ 3,99 / maand.
Gaa na webụsaịtị: https://www.hostinger.com/
Alele bụ otu n’ime webhost web dị ọnụ ala karịa, ọkachasị n’oge nnabata afọ ezumike nka. N’agbanyeghị ịbụ ụlọ ọrụ Bochum mmefu ego, Hostinger na-enye ọtụtụ atụmatụ atụmatụ Bochum dị mma maka ndị na-ede blọgụ.
SiteGround na-akwụ ụgwọ $ 3,95 / mo maka otu blog.
Pro NDỤMỌDỤ: Maka na onye na – ahụ maka weebụ na – ewu ewu, apụtaghị na ọ kachasị mma maka blog gị. Lelee arụmọrụ ọbịa ma lelee nke ọma tupu ime mkpebi.
2. Gosiputa ngalaba DNS n’ebe onye web gị nọ
Ọzọ, ịkwesịrị imelite ndekọ DNS na ngalaba aha na-edeba aha (ebe ị debanyere aha ngalaba gị na nzọụkwụ # 1) na-arụtụ aka na sava weebụ gị (InMotion Hosting, Hostinger ma ọ bọ SiteGround).
DNS guzoro na ngalaba Aha Sistem ma a na-eji ya eduzi onye ọrụ ọ bụla na-abata kwupụta adreesị IP nke sava ahụ. Yabụ, mgbe onye ụrụ batara “WebHostingSecretRevealed.net” ihe ndekọ DNS ga-ebugote adreesị IP nke onye web m ma jeere onye ọrụ m saịtị ahụ.
Ihe Nlereanya: Itinye aka op websaịtị op InMotion Hostingerer op GoDaddy.
N a a bụ ntuziaka usoro maka iji melite blog blog gị na GoDaddy of Namecheap.
3. W WordPressnye WordPress na webhost gị
IJi malite ọde blọgụ site na iji WordPress ị ga-ebu ụzọ wụnye sistemụ ahụ n’ime onye na-elekọta weebụ gị. Enwere ike iji nke a mee nke a, ma ọ bụ iji ngwa nwụnye otu ngwa-ngwa. Methodszọ abụọ a dị mfe nfe ma enwere ike ịme ya ngwa ngwa.
Ntinye akwụkwọ ntuziaka WordPress
Na ngwa ngwa, ebe a bụ usoro ịkwesiri ịme:
Nbudata ma kpochie ngwugwu WordPress op pc gị.
Mepụta nchekwa data maka WordPress na sava weebụ gị, yana onye ụrụ MySQL nke nwere ihe ùgwù niile maka ịnweta ma gbanwee ya.
Kpọgharia faịlụ wp-config-sample.php ka wp-config.php.
Mepee wp-config.php na ederede ederede (notitieblok) ma jupụta nkọwa data nchekwa data gị.
Tinye faịlụ WordPress na ọnọdụ achọrọ na sava weebụ gị.
Gbaa akwụkwọ edemede WordPress ahụ site on ịnweta wp-admin / install.php na ihe nchọgharị weebụ gị. Ọ bụrụ na ị wụnye WordPress na ndekọ ndekọ, ị ga-aga: http://example.com/wp-admin/install.php; ọ bụrụ na i tinyere WordPress na ya onwe ya na-akpọ blog, dịka ọmụmaatụ, ị ga-aga: http://example.com/blog/wp-admin/install.php
E mekwara gị.
Zie WordPress Otu Pịa
Ụtụtụ ndị na-ede blọgụ n’oge a anaghị etinye aka WordPress ha.
Site na nkwado nke ụrụ ntinye ọpịpị dịka Softaculous na Mojo Market Place (ab dabere na nke web host ị na-eji), usoro nrụnye dị ezi n’iru ma enwere ike me ya na ole na ole dị mfe.
Maka ntụaka gị, ihe onyonyo ndị a na-egosi ebe w nwere ike ịchọta njikwa nwụnye akpaaka gị dashboard. IJi wụnye WordPress, dị nnọọ pịa akara ngosi gbara gburugburu ma soro ntuziaka akaebe zuru oke – sistemụ WordPress gị kwesịrị ịdị na-arụ ọrụ na erughị nkeji ise.
Ihe Nlereanya: can nwere ike iwunye WordPress onye on-elekọta weebụ gị naanị ole na ole na iji iji Hostinger Auto Installer (gaa na Hostinger ebe a).
Ih nwere ike ịdị iche maka ndị web na-ahụ maka weebụ mana usoro a bụ otu. Ya mere nwutela ma o buru na i jighi otu ndi agha a m na e gosi n’ebe a.
Ntak emi WordPress?
Onwe m eche na WordPress door usoro ọde blịgụ kachasị mma maka nieuwkomers. Dabere op de website van Wuru Na, op 95% van de Verenigde Staten op WordPress WordPress. N’ụwa niile, ọ fọrọ nke nta Nde blọọgụ 27 na WordPress na WordPress.
4. Chọta Peeji WordPress Admin gị ma banye
Ozugbo itinyela sistemụ WordPress gị, a ga-enye gị URL ka ịbanye na ibe nchịkwa WordPress gị. N’URLtụtụ oge, URL ahụ ga – abụ ihe dị ka nke a (ab dabere na folda ị wụnyere na WordPress):
Gaa URL a wee banye aha njirimara na paswọọdụ gị site n’ebe ahụ, ị ​​ga-anọ ugbua na njedebe (dashboard) nke saịtị WordPress gị – nke a bụ akụkụ nke blog ebe naanị gị dịka onye nchịkwa nwere ike.
Mepụta blogpost ụhụrụ na WordPress Gutenberg ọhụrụ.
WordPressdị WordPress kachasị ọhụrụ n’oge ederede bị ụdị 5.3.2 – na ndabara ka ị ga-eji WordPress Gutenberg dị ka onye edemede ederede. Gutenberg na-e-wet-en-word-en-WordPress. Nke a bara uru maka ndị mbido ebe ọ bụ na ọtụtụ ihe dị ka ịtọlite ​​ụla n’azụ na ihe ndị ọzọ anaghị achọ ụkọ. Usoro ngọngọ na-enyere aka na njikwa okirikiri ederede.
IJi dee ma bipụta ọkwá ọhụrụ, gọọgharịa gaa n’akụkụ aka ekpe, pịa ‘Posts’> ‘Tinye Nkọwa’ na ị ga-eduzi na ngere ederede. Pịa ‘Preview’ ka ị hụcha ihe ihe dị na njedebe (ihe ndị na-agụ gị ga-ahụ), pịa ‘Bipụta’ ozugbo oge zuru ezu.
Hallo! Nu bipụtara akwụkwọ blog mbụ gị.
Gaa na: Akwụkwọ edemede WordPress
Nke a bụ ebe ị nwere ike ịnweta isiokwu WordPress n’efu. Ederede edepụtara na akwụkwọ ndekọ a na-agbaso ụkpụrụ siri ike nke ndị mmepe WordPress nyere, ya mere, n’echiche m, nke a bụ ebe kachasị mma iji nweta atụmatụ isiokwu adịghị mma.
2. Kwụsị WordPress Gburugburu klọb
Ịzọ ọzọ ị ga-esi nweta isiokwu dị elu nke a na-akwụ ụgwọ bụ ịdenye aha na Clubs Club WordPress.
Ọ bụrụ na nke a bụ oge mbụ ị nụrụ banyere klọb Okwu egwuregwu, lee ka o si arụ ọrụ: You na-akwụ ego ole iji sonyere klọb ahụ, ị ​​na-enwetakwa atụmatụ dị iche iche enyere na klọb. A na-ahazi usoro ngosi enyere na klọbgụ Theme.
mara Gburugburu, Studio Press, na Ihe eji eme ihe bụ bijọ WordPress Gburugburu klọb m nwere ike ikwu.
Enwere ọtụtụ ndị ọzọ nọ n’ebe ahụ – ụfọdụ klọb na-ebute otu ụlọ ọrụ dị iche iche, dị ka ndị ezigbo ụlọ ahịa ma ọ bụ ụlọ akwụkwọ; ma anyị ga-ekpuchi atọ n’ime isiokwu a.
Mara Gburugburu Gburugburu – Karịrị 80 adịgboroja WordPress gburugburu, pịa ebe a iji lee onodu okwu mbu.
Gaa na: StudioPress.com. Ahịa: $ 129,95 / isiokwu ma ọ bụ $ 499,95 / ndụ
Ọ bụrụ na ị bụ onye ọrụ WordPress oge, mgbe ahụ, ị ​​nụla banyere StudioPress. Ọ na-ewu ewu maka ya Jenesis Framework, en minimalistisch na SEO-enyi op enyi WordPress kpuchie niile StudioPress gburugburu.
StudioPress na-enye ọnụahịa mgbanwe dịka mkpa gị. Okpokoro Genesis na isiokwu nwata nwere maka ugwo ugwo nke $ 59,99. Ihe kachasị mkpa, nke gụnyere Igodo Jenesis, na-efu $ 99 ọ bụla. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịnweta niile gburugburu, w nwere ike ịkwụ ụgwọ $ 499.
Ihe eji eme ihe
Njikere mere saịtị ndị Artisan Themes nyere.
Mụtakwuo: Ndị a bụ ọtụtụ ihe ndị ọzọ dị mfe ị ga – eme iji chebe blog WordPress gị
Ngwa mgbakwunye maka arụmọrụ blog kachasị mma
Een bịa na njikarịcha arụmọrụ blog. W3 Totale cache na Nrụ ọrụ ọsọ ọsọ bụ nhọrọ kachasị ewu ewu.
Ihe mgbakwunye arụmọrụ abụọ ndị ọzọ ị kwesịrị ịlele Igwe ọkụ, na WP Super Cache. Cloud Flare door mgbakwunye nke nlọ ọrụ CDN nyere, Cloud Flare; ebe WP Super Cache mepụtara site na Donncha na Automattic, ụlọ ọrụ mepụtara ma na-arụ ọrụ WordPress ugbu a.
Ihe mgbakwunye mkpọchi bu ihe kwesiri ntaneti na ụwa ịde blọgụ ọgbara ọhụrụ – ọ na – eme ka ahụmịhe onye ọrụ dị mma site na ịbawanye arụmọrụ sava ahụ, belata oge ewepụsaraa na.
Ọ bụrụ na blọọgụ gị nwere ọtụtụ onyonyo dị na ya – tulee itinye EWWW Image Optimizer. Ọ bụ otu njikarịcha ihe oyiyi na-eme ka enwee ike iwepụta ihe eserese onyonyo nke ọbá akwụkwọ gị. O nwekwara njiri aka na-egosipụta mkpirisi onyonyo iji belata ogo onyonyo mgbe ị na-ebugote ha. Site na iji eserese kachasị mma, w nwere ike belata oge ibu peeji ma rụpụta arụmọrụ saịtị ngwa ngwa.
Mụtakwuo: SEO 101 maka nd ed na-ede blọgụ mbụ
Ngwa ndọkụrịta maka Gutenberg
Site na niet meer Gutenberg nchịkọta akụkọ na WordPress 5.0, ndị na-ede blọgụ nwere ike ịmepụta ọdịnaya ugbu a site na iji nchịkọta akụkọ na-egbochi ngọngọ. Site na ndabara, WordPress na-enye setịpụrụ ngọngọ ọdịnaya dịka paragraf, eserese, bọtịnụ ịkpọ oku na-eme, koodu mkpirisi, na ndị ọzọ. Site na bakgbakwunye na plug-ins Gutenberg, – ga – agbakwunye ihe ndị ọzọ na – etinye aka (dịka ọmụmaatụ – FAQ, accordeon, profaịlụ edemede, carrousel, pịa-naar-tweets, GIF-blokken, wdg) na blog gị.
Stapelbare, ultieme blokken, na CoBlocks in het geval van Gutenberg Block plug-ins na-akwụghị ụgwọ ịnwale.
Isi nke 4. ingchọta Niche na ingmepụta Ọdịnaya
Nke a bụ nke ọhụụ dịka newbie na-amalite blọọgụ: ha ga-ede banyere ọrụ ha na Mọnde, ihe omume ntụrụndụ na Tuesday, fim ha lere na Wednesde, na echiche ndọrọ ndọrọ ọchịchị na nwws. Na nkenke, ndị a na-ede ederede na isiokwu dị iche iche n’ejighị isi okwu ọ bụla.
Ee, blọọgụ ndị a ga-ejikọta ọnụ n’etiti ndị enyi na ezinụlọ ha; ma nke ahụ bụ maka ya.
O siri ike inwe ọnụ ọgụgụ dị mkpa nke ndị na – agụ akwụkwọ na – eguzosi ike n’ihe mgbe ị na – ede blọgụ na – akpaghị aka n’ihi na ndị mmadụ agaghị ama ma ọ bụrụ na ị na – akat ma ọ bụ akwụkwọ na – akatọ akwụkwọ. Ndị na-akpọsa ngwá ahịa ga-achọkwa ịkpọsa gị maka na ha amaghị ihe ị bụ. IJi wuo blog na-aga nke ọma, ịkwesịrị ịchọta niche.
Otu esi ahọrọ niche ọde blọgụ ziri ezi?
IJi chọta nging ọde blọgụ ziri ezi, ebe a bụ isi ihe ị ga-atụle.
1. Mejupụta mkpa
Ọ bụrụ na ọ dịtụla mgbe ị chere "M ga-achọ ka mmadụ dee blog banyere ya", nke ahụ bụ oge a-ha. Ọ bụrụ na ọ bụ isiokwu ịchọrọ ịmatakwu banyere, mgbe ahụ, ọ ga-abụ isiokwu nke ndị ọzọ chọrọ ịma.
Kedu ihe ọmụma gị pụrụ iche? Kedu ka ị ga – esi nye ihe dị iche iche na isiokwu nke onye ọ bụla ọzọ nwere ike ime? O nwedịrị ike ịbụ site na mkparịta ụka gị na ọkachamara.
Omumaatu: Gina nke blog, Na-ekpuchi ezughị okè, na-elekwasị anya n’inyere ndị nne aka ịzụlite ụmụ nwere mkpa pụrụ iche.
2. Ihe ị chọrọ
Cheta na ị ga-ede akwụkwọ, ịgụ ma na-ekwurịta okwu gị kwa ụbọchị maka afọ ole na ole sochirinụ. Ọ bụrụ na ịnweghị mmasị na isiokwu blog gị, ọ ga-esiri gị ike ijisi gburugburu mgbe niile.
Ọzọkwa, ị ga-enwe mmasị ide in the ndị ahụ.
3. Isiokwu was ike ịnọgigide
Ọ bụ ezie na esemokwu dị ukwuu, ọ gaghị eme ka okwu gị bụrụ ebe a n’izu na-esonụ. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ị nwere nnọọ mmasị na Vine ma malite na blog dabere na ya, mgbe nke ahụ daa na ejiji ị ga-abụ nke ọdịnaya. Mm ka mma ka ị lekwasị anya n’inwekwu okwu n’ozuzu, dịka "ịmepụta mgbasa ozi mgbasa ozi ọha na eze" ma ọ bụ "ngwa ọdịyo dị egwu". N’ụzọ dị otú a, ọ bụrụ na ụda daa na ejiji, blog gị ka nwere ike ịnọgide na-ele anya maka ihe ọ bụla na-agbanwe ya.
Gị blog kwesịrị ịdị niche na i nwere ike ime ego.
Jụọ onwe gị ma ọ bụrụ na ọ bụ isiokwu ga-adọta ndị na-agụ akwụkwọ ma mepụta ego – ma ọ bụ site na mgbasa ozi ma ọ bụ ahịa. Ọ bụrụ na ị na – ede blọgụ iji kwado azụmahịa gị dị, blọọgụ ọ na – ebute ndị ahịa ọhụrụ? Ọ bụrụ na ị na-ede blọgụ naanị n’ihi na ị nwere mmasị na isiokwu ahụ, enwere ụzọ ị ga-esi tinye blog nke gị n’otu n’otu?
M na-eji SpyFu, ngwa mgbasa ozi nke Pinye aka-na Pịa aka ọrụ, iji tụta uru ọghọm bara uru mgbe ụfọdụ. Echiche m n’azụ nke a – ọ bụrụ na en mgbasa ozi na-akwụ puku kwuru puku dollar na Google Adwords, ọ ga-enwerịrị ego ị ga-eme n’ubi a. Lee ihe atụ abụọ m chọtara:
Ihe Nlereanya # 1: Nke a bụ stats mgbasa ozi maka onye na-emepụta ihe eji eme egwuregwu (na-eche ụdị egwuregwu dịka Adidas ma ọ bụ Nleba Ọhụrụ mana ntakịrị). Ụlọ ọrụ a na-etinye ihe karịrị $ 100.000 kwa ọnwa na Adwords dị ka Spyfu.
Ihe Nlereanya # 2: Nke a bụ mgbasa ozi mgbasa ozi maka onye na-eweta ngwanrọ IT. E nwere 20 ndị ọzọ nnukwu egwuregwu in een niche a. Ụlọ ọrụ a, karịsịa, mgbasa ozi azụtara na mkpokọta 3.846 na Google ma jiri ihe dị ka $ 60.000 kwa ọnwa.
Mụtakwuo: Otu esi ede ma ọ dịkarịa ala otu nnukwu ọdịnaya n’otu izu ugboro ugboro
Isi nke ise 5. Growtọ Blog
Eziokwu dị mwute nke ọtụtụ ndị na – ede blọgụ nọ na ya ọ werela ọtụtụ oge iji wulite akwụkwọ ha. Nweta nyocha puku peeji mbụ ha nwere ike waren ọnwa, ụfọdụ blọọgụ ọkacha mara ọfụma na-abịabakwa ebe ahụ.
Ndị a bụ atụmatụ ụzọ ihe ise ga-enyere gị aka iwere blọgụ gị site na nlele peeji 1 ruo 1.000.
1. Dee ihe ndi mmadu choro iguta
Ndị mmadụ na-eriju na mmelite mgbasa ozi nke mgbasa ozi, ndepụta ozi ọma, ozi ịntanetị, na ụdị mgbasa ozi dị iche iche. Ọ na-esikwu ike ime ka ndị mmadụ gụọ ọdịnaya gị. Agbanyeghị, ị ka nwere ike ịme nke ọma ma ọ bụrụ na ịmara onye bụ ndị na – ege gị ntị bụ na ihe ha na – achọ. Chee echiche banyere oghere dị na niche gị, ụdị ọdịnaya adịghị efu na otu ị ga – esi weta ndị na – ege gị ntị uru.
Ndị a bụ ihe ga – enyere gị aka na nyocha gị:
Jiri ngwaọrụ mgbasa ozi na-elekọta mmadụ iji soro ihe na-aga nke ọma na sociale media. N’ebe dị otú a, ị nwere ike iwepụta echiche ọdịnaya nke na-enweta ezigbo nzaghachi site na mgbasa ozi mgbasa ozi.
Jiri ngwaọrụ ọdịnaya dịka Zaa Ọha ịchọrọ maka ajụjụ ndị ama ama ndị mmadụ na-ajụ op Google.
Jiri ọnụọgụ nlele na YouTube chọta isiokwu ndị mmadụ nwere mmasị na ya.
Jiri ngwa nyocha okwu iji chọpụta isiokwu ụfọdụ ndị mmadụ na-achọ n’ime niche gị. Nwere ike iwepụta ọdịnaya dabere na isiokwu ndị ahụ.
2. Soro ndi obodo gi
"Ikekọrịta na ime" abụghịzi aha egwuregwu ahụ.
Kwesịrị ịkekọrịta plaatst gị ugboro ugboro. Ọ bụrụ n’kpọku gị ka ị sonyere bọọdụ Pinterest nke dabara niche gị, debanye ma kekọrịta na ịza ajụjụ ugboro ugboro. Ọ bụrụ na i sonyere na ndepụta nke ndị na-ede blọgụ nwere echiche, ọdịmma bụ na ha ga-ekerịta ihe ibe ha oge niile – kwa izu ma ọ bụ kwa ụbọchị. Nke a ga – enyere aka ọgụgụ gị na itinye aka gị.
Jiri nwayọ choo ebo gị – kwụọ ndị ọzọ nọ na ya ụgwọ ma soro ha jikọọ.
Nyere aka na mmemme Twitter. Ikwu na nzaghachi ndi otu ndi ozo. Kekọrịta ederede na akwụkwọ akụkọ gị. Gbakọọ ma kwụghachi ụgwọ blọọgụ ị hụrụ n’anya site na ịgosipụta otu izu ma ọ bụ ọnwa.
Jụọ otú ị ga-esi nyere onye ọzọ aka ma ọ bụ site n’inye ndị ọbịa akwụkwọ ozi. Na-ere ngwaahịa ha, jiri njikọ ha mmekọ, kwalite njikọ ha na mgbasa ozi gị mgbe ị na-edecha ha. Dịka ohere iji weghachite ndị na-ede blọgụ, ndị na-ede blọgụ a ga-echeta enyemaka gị ma kpọọ gị ka ị bịa.
3. Gbalịa mee ka blog gị dị mfe ọgụgụ
Ọ na-ewe m iwe mgbe m chọtara blog nwere isiokwu enwere m obi anụrị naanị ịchọta ọdịnaya ahụ na nnukwu ederede, paragraf ole na ole, enweghị isi ma ọ bụ mgbọ na obere mkpụrụ okwu. Nke ahụ na-achụpụ m.
N’elu ihe m hụtụrụla n’elu, blọọgụ gị ekwesịghị iji mmapụta na pịa pịa. Kama, waren nwayọ gosi ndị na – agụ ya ihe ha dere. Mara nsogbu oge ndị na – agụ akwụkwọ gị wee ghọta ihe kpatara ha iji nọrọ na saịtị gị.
Nke a bụ ihe ị ga – eme iji mee ka blog gị dịkwuo mfe ọgụgụ:
Ebuli blog gị site na iji isi, sub-isi, isi mgbu, ma ọ bụ ndepụta edepụtara. Nke a na-enyere ọdịnaya gị aka ịhazi ka ahaziri nke ọma.
Kewaa blog gị na ngalaba ma ọ bụ paragraf. Mgbidi ederede nwere ike iyi ihe na-emenye ụjọ ma na-eju ndị na-agụ ya anya.
Zere iji mkpụrụ edemede mara mma. Nọgidesie ike na mkpụrụedemede nchekwa weebụ dịka Arial, Georgia, Times, wdg.
Jiri Bekee dị mfe ma dee ahịrịokwu dị mkpụmkpụ. Mee ka amụrụ ihe ị ga-agụ maka ụmụ akwụkwọ klas nke asatọ.
Gbanyụọ, ịza ajụjụ na blọọgụ bụ ụzọ kacha eleghara anya maka ewu okporo ụzọ blog – nke kachasị n’ihi na ndị mmadụ na-ackụ ime ka nnabata, mkparịta ụka bara uru na ndị mịa mịa Agbanyeghị, ịza ajụjụ banyere blọọgụ bụ ụzọ dị mma maka ewu okporo ụzọ na-adịkwa n’efu – enweghị ike ịgbagha nke ahụ!
E nwere iwu ọla edo abụọ iji mee ka nkọwa maka ịde blọgụ:
Dee ezigbo nkọwa mgbe niile. Ọ bụrụ na ịnweghị ihe bara uru ị gbakwunye na mkparịta ụka ahụ, ahapụla ikwu (“Daalụ – nnukwu post” … ha abaghị uru)
Naanị dobe njikọ ebe dabara adaba. Achọgharịla spam, n’agbanyeghị ụdị ọnwale ọ nwere ike ịbụ; ọ ga-agbakwasị gị.
Mgbe iwu ọzọ (ọ bụghị iwu ọla edo, ikekwe), ọ bụrụ na ị hapụ njikọ, enyela URL nke blog gị. Kama nke ahụ, jikọta post nke gị mkpa nke na-agbakwunye uru na post na mkparịta ụka mbụ. Relevantie bụ isi ebe a.
5. Ajụjụ-platform Q&EEN
Nzukọ na ntanetị na Q&A bụ ebe dị mma ịnweta oche n’ihu ndị na-ege gị ntị nwere mmasị, nwere mmasị. Ihe a bu n’uche nyochaa mkparịta ụka na-aga n’ihu na niche gị ka ị wee chime mgbe ị nwere ihe ga – enyere gị aka ikwu (ma ọ bụghị, ọ bụghị post ọ bụla ga – abụ ohere – mana ụfọdụ ga – eme). Ga-achọ ezigbo onye na-agụ akwụkwọ, dị ka Feedly, iji rụọ ọrụ a.
Notchọtaghị otu dabara adaba ma ọ bụ ezuru ohere iji nweta ihe?
Mepụta ụfọdụ ọdịnaya omenala metụtara mkparịta ụka na-ekpo ọkụ. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na mmadụ ajụọ otu esi eme koodu .htaccess koodu, ị nwere ike ide nkuzi wee zipu ya na blọọgụ gị – mgbe ahụ, na ngalaba Q&A nke saịtị ahụ, zaa onye chọrọ ya na teaser, jikọ ha na blọọgụ gị. iji nweta koodu na demos zuru ezu. Nsogbu bụ na ọ bụrụ na otu onye jụrụ ajụjụ ahụ, ndị ọzọ nwere otu ajụjụ ahụ – azịza na njikọta okwu gị ga-aga n’ihu na-adụ ha ọdụ ma oge ahụ bịara.
N’ihe banyere usoro Q&A iji mee ihe, m na-akwado
Quora, Klout, na Yahoo! Azịza – ndị a bụ ụzọ atọ kachasị mma nke ikpo okwu Q&EEN
StackOverflow – ọ bụrụ na ị bụ onye nkwusa na-ere akwụkwọ mmemme.
Tripadvisor – Maka ndị na – ede blọgụ njem
Mụtakwuo: Choo uzo ozo iji tinye mon blog gi wee gụpụta nke Kevin Muldoon ụmụmụ ikpe na-ere BloggingTips.com verdiende $ 60.000.
Isi nke 7. Iji Blogde blọgụ Efu
N’agbanyeghi na akụrụngwa na arụ ọrụ weebụ bara uru na ntanetị, nsogbu a na – akpọlite ​​ha n’etiti usoro ndị ọzọ niile ma ọ bụ / na ihe mgbe ochie.
Dika onyinye nke nkpu maka iguta akwukwo m rue ebe a, aga m enye gi ndepụta nke oru efu ndi anyi ji eme ihe n’oge nile na WHSR. Enwere m obi ụtọ, m ga-achọ ka ị nwee ihe ịga nke ọma na njem ịde blọgụ gị.
Mgbe Emechara – Ọga n’ihu na ụtọ asụsụ.
Grammatica – Kasị ewu ewu na ntanetị nnyemaaka.
Hemingway App – Jiri is een dee mkpirikpi na nkwuwa okwu.
Nnwere onwe.to – Gbochie ebe nrụọrụ weebụ na-adọpụ uche ka ị nwee ike lekwasị anya n’ide ederede.
SiteWord – Ngwá ọrụ ederede n’efu.
Evernote – Otu ngwaọrụ kwesịrị iwebata.
Fotor – Dezie ma chepụta ngwa ọmarịcha ihe osise maka mgbasa ozi mgbasa ozi, akwụkwọ mmado, akwụkwọ ịkpọ oku wdg
Canva – Chepụta ọmarịcha ihe onyonyo na nke mgbasa ozi mgbasa ozi.
Ọkachamara Ọtọ – Mepụta ihe osise mara mma site na iji ndebiri n’efu na ihe osise emere.
JPEG Obere – Belata nha nke faịlụ .jpeg.
PNG obere – Belata nha nke .png faịlụ.
Skitch – Iche ndetu ihe onyonyo.
Ọchịchị Pic – Ngwongwo na-emeri ihe ntughari nke onyinye.
Pik na Chart – Mfe okike ihe omuma ihe omuma.
Pixlr – Ntanetị ederede.
Favicon.io – Onye kachasị eweta favicon jenerato, mgbe ọ bụla.
Foto Foto na Foto Onwere Onwe
Onye Nchọta Icon – Akwụkwọ ndekọ akara ngosi buru ibu.
Faili Morgule – Ihe kariri onyonyo 350.000 maka iji azụmaahịa.
Ngwa ahịa – Ebe ndekọ ihe onyonyo nwere foto mara mma nke agbakwunyere kwa izu.
WHSR Ihe Oyiyi Oyiyi – Ihe ngosi efu bu nke ndi okike ulo.
Ntuziaka & nyocha
Sayensị Ụwa – Akwụkwọ akụkọ agụmakwụkwọ n’efu.
Akwụkwọ Eziokwu nke Ụwa – Enweghị ochi egwu – ozi ụwa ozugbo sitere na CIA.
Tech Republic – Akwụkwọ ọcha, akụkọ, yana ọmụmụ gbasara teknụzụ.
Sherpa Marketing – Akụkọ azụmaahịa na – akwụghị ụgwọ.
Ọlọ ahịa ahịa – Akwụkwọ na – akwụghị ụgwọ, akwụkwọ ọcha, na ọmụmụ ihe.
Hubspot Library – Ezigbo akwụkwọ ntụaka na ahịa.
CrunchBase – Akụkọ banyere ụlọ ọrụ mbido.
Ụdị Ụgha – Chọta isiokwu na – ekpo ọkụ kacha ọhụrụ na BuzzFeed.
Ih okike ide ihe – Echiche na kpaliri iji merie ederede mgbochi.
Waarschuwingen Google – Nweta ozi ịntanetị dị njikere na ọdịnaya ọhụrụ ị na-achọ.
Sociale media, Ahịa & SEO
Ngwá Ọrụ Weebụ Bing – Ngwá ọrụ nyocha saịtị n’efu nke Bing.
Ngwá Ọrụ Webmaster Google – Ngwá ọrụ nyocha saịtị n’efu nke Google.
soro – Stalk ndị asọmpi gị
Ebube di nma – Nbudata n’efu na-enye gị ohere inyocha profaịlụ njikọ saịtị (CF / TF) ngwa ngwa.
Na-aga Bay -Azụ ahịa, ire & ngwa ọrụ akpaaka
Ochichi ndi ozo di otua – Lelee maka peeji en gbagoro na blọọgụ gị.
Dị ka Explorer – Lelee metrik nke ọdịnaya (ma ọ bụ ndị asọmpi) gị.
Tweet Deck – Ijikwa otutu akaụntụ Twitter n’otu dashboard.
Buzz Sumo – Chọta ọdịnaya dị egwu na ndị na – eme ihe ọfụma na netwọ mgbasa ozi mmekọrịta ọha
Kọlọtọ Board – Nnyocha ahịa ahịa mgbasa ozi.
IFTTT – Mbipụta ọdịnaya na nyiwe mgbasa ozi ọtụtụ mmadụ na-adị mfe.
Nchịkọta Ntanetị & Nrụpụta Weebụ
Google Analytics – statistieken web n’efu.
Matomo – Nchịkọta Google Analytics Google.
Nchịkọta YouTube – Statistieken na vidiyo YouTube gị.
WP Statistics – Blog blog WordPress g n na nd ọzọ.
Ụzọ nhazi – Usoro dị mfe na nhazi njikwa ọrụ.
Nnwale Ọgba Weebụ
Bitcatcha – Lelee ọsọ saịtị site na saịtị iri.
Nnyocha Ule – Lelee ọsọ webpagina zuru ezu.
GT Metrix – Nwalee ma soro webpagina laden ọsọ n’ụzọ zuru ezu.
De blọgụ ugboro ugboro
1. Ego ole ka ọ na-eri ịmalite blọọgụ?
Ego ole echere ka ịmalite blọọgụ gụnyere aha ngalaba na nnabata weebụ dị n’okpuru $ 100 kwa afọ (erughị $ 10 kwa ọnwa). Ụnụ ego a dabere na blọọgụ ejiri aka gị (iji WordPress). Nkwụsị nke ụgwọ ahụ ga-abụ: $ 15 kwa af maka aha ngalaba .com na dhka $ 60 kwa afọ maka ego nnabata web.
2. Kedu otu esi akwụ ndị na-ede blọgụ ụgwọ?
IJi nweta ezigbo foto maka otu esi akwụ ndị na-ede blọgụ ụgwọ, edepụtara m ha na ụdị 2 – otu bụ ebe ị na-emeso ndị ahịa ma ọ bụ ndị mgbasa ozi ozugbo ebe nke ọzọ ụemme ọemme ọụem ọemme ọemme ọemme ọemme ọemme ọemme ọemem ọemme ọemme ọemme ọemme ọemme ịemme ọemme ọemme ọemme ịemme ịemme ịemme ịemme mmemme ịemme ịemme ịemme mmemme ịemmeọ mmemịem bụ netwọk nyere.
Mgbe gị na ndị ahịa ma ọ bụ ndị mgbasa ozi na-emekọrịta ihe, ị na-enwe ike ijikwa ọnụahịa ahụ. Inwere ike inweta ego site na:
– Na-ere ọdịnaya dị mma (saịtị otu)
– Direct mgbasa ozi
– ellingzụ ngwaahịa gị
– bọọdụ Job
– Ederede na biputere berichten nkwado
3. Ka ịmalite blog n’efu?
Enw ọtụtụ nyiwe ebe w nwere ike ịmalite blog efu taa, nke a gụnyere WordPress.com, Tumblr ma ọ bụ Blogger. IJi mepụta blog n’efu, ihe ị ga – eme bụ bdebanye aha ma ị nwere ike ịmalite ibipụta ọdịnaya gị.
4. Gini bu njigide na azu azu nke ịde blọgụ n’efu?
O nweghị ihe na-abịa n’efu n’ụwa anyị. Enwere ọghọm dị na ọtụtụ ịde blọgụ ntanetị n’efu:
– E nwere iwu dị n’elu ikpo okwu ọ bụla ịkwesịrị idebe
– Aha ngalaba nke blọọgụ gị ka ọ bụrụ subdomein dịka “myblogname.wordpress.com” ma ọ bụ “myblogname.tumblr.com”
– E nwere obere ụrụ, plug-ins na nhọrọ isiokwu ị nwere ike ịme blọọgụ gị
– Ụtụtụ mgbe, ikpo okwu anaghị akwụ ụgwọ iji gbochie blog gị
Ana m ato aro ka ị malite blog gị site na iji WordPress.org kwadoro onwe gị (dị ka ihe m kpuchiri na ntuziaka a). E wezụga imeri mmachi nke blog efu, mmụba nke blog gị nwere enweghị njedebe.
Ma, lee ihe gbute azụ:
E nwere iwu dị n’elu ikpo okwu ọ bụla ịchọrọ ka edebe
Aha ngalaba nke blọọgụ gị ga-abụ subdomein dị ka “myblogname.wordpress.com” ma ọ bụ “myblogname.tumblr.com”
Enwere obere ụrụ, plugins na nhọrọ isiokwu ị nwere ike ịme na blog gị
Ụtụtụ mgbe, usoro ikpo okwu n’efu na -emechi ohere nke geld verdienen gị blog
Enwetara ihuenyo Mpempe akwụkwọ Mgbasa Ozi WordPress.
Everchọtụla ịmalite blọgụ nke gị? Ma ọ bụ, al nweela blog ị na-ejighi n’aka
Everchọtụla ịmalite blọgụ nke gị? Ma ọ bụ, уже блог nweela ị na-ejighi n’aka
Everchọtụla ịmalite blọgụ nke gị? Ma ọ bụ, jau nweela emuārs ị na-ejighi n’aka
Praktisk webbplats Zvido Zvekuchengetedza: 6 Zvinhu Unofanira Kuita Kuti Uchengetedze Nzvimbo Yenyu
Revisão de ElegantThemes.com: Zvinhu Zvose Zvaunoda Kuti Uzive Nezvinhu Zvakanaka
Kif Ibda Blog veiksmīga, 2. daļa: Promozzjoni u Monetizzazzjoni
Ką „Pop Sensacija“ Taylor Swift gali išmokyti jus apie sėkmingo tinklaraščio tvarkymą
Você está no za ku bayar de kauta no zaman horo don kafa kan kanku e Hukuma
Pesquisar banco de dados MySQL no phpMyAdmin
WordPress Securitatis Wskazówki dla laika, fretus vestri WordPress Logowanie i komentarz Criticum i inne Bezpieczeństwo
Hvordan kan du ikke delta i ekstraordinære blogginnlegg som en verdens brekk (i og utenfor det)
Интервју са домаћином: Питања и одговори ЦЕО СитеГроунд Тенко Николов
Изидинго зокувикелека зеВебху ие-веб страница: Изинто зе-6 Окумеле уквензе укузе Увикелекиле Ивебхусаиитхи Иакхо
Ce să faci când cineva îți fură conținutul unic al site-ului
15 Nā Manaʻo Pono e hoʻomaikaʻi ai, Hoʻolālā a loaʻa aʻe na kaʻa aʻe ma kuu blog em kia lā
Mantene un ochju ticamības apliecinājumos par svaigošanu
Успех AccuWebHosting благодаря отзывчивости клиентов
Skicka e-post till ditt företag via e-post till ditt företag
Kaip nustatyti ir dirbti su „WordPress“ svetainėmis
글쓰기 속도를 높이고 양질의 블로그 게시물을 작성하는 8 가지 방법
Sida loo Isticmaalayo Shirarka Telefoonada bilaash ah si loo dhiso Pembaca dalam talian
20 de idei de direcționare bazate pe interese, pentru următoarea dvs. campanie publicitară Facebook
15 dicas práticas para melhorar, promover e obter mais tráfego para seu blog hoje
専門家インタビュー：Social Goodがブロガーをどのように支援するかについてのDebbie Bookstaber
ʻO kaPūnaewelepūnaewelemaikaʻi loa ma 2020（Kūkuluʻia manāʻike maoli a menākumu hana）
Как начать успешный блог мамы, часть 3: Сеть в вашей нише
Njia Tatu Rahisi pie Kuunda Tovuti: Mwongozo wa Mwanzo-hatua-Mwanzo
Levando a criatividade além da tela com o Canva
Gingde blọgụ maka Mwakpo: Otu esi amalite Blogg kema na 2020
Pro nullam dolore, quem ad modum sunt sunt no MMXX Blog
Idebe ihe ntinye na ntanetị na ntanetị
인 셉터 가이드 : Quid Duis egestas elementum risus? est 도메인을 종료 하시겠습니까? 서로 다른 영역과 영역을 뒤섞은 요소
블로그 Aha Echiche : 블로그 Iji Họrọ The zuru okè Aha N’ihi na gị 블로그
У Беха Нтхо е Икхетханг еа Сетшоантшо ка ВордПресс јоанг?
Libaka tse hlollang tsa 30 tse tsamaisoang ke 워드 프레스
3 Pemasaran Twitter Atụmatụ Maka Perniagaan Perniagaan Kecil
Tilleggsinformasjon om VPN 2020: 10 år siden VPN در مقایسه
Så lägger du till Google Kalender på din WordPress-webbplats
Webホストのインタビュー：SiteGroundのCEO Tenko NikolovのQ＆A
Студија случаја: Хов Мике Молонеи Боотстраппед ФилтерГраде
Casestudy: hoe Mike Moloney FilterGrade opstartte
Sondaj de găzduire web 2016: Rezultate, Repere și Consiliere de găzduire
Интервју веб домаћин: извршни директор ВебХостФаце, Валентин Схарланов
10 väsentliga regler för effektiv LinkedIn-marknadsföring
Cum să creezi videoclipuri uimitoare în social media în 5 minute
Et Quis, quid, ubi, quando and quare optime de Scriptura Blog
Монетизация YouTube: Wéi DirTubers hir Suen maachen
Приступник сценариј Ректор ут продајне суфузије (ет Куам ут Партум Вестри Овн)
De basis van .htaccess: gebruik en voorbeelden
ElegantThemes.com 검토 : 당신은 우아한 테마에 대해 알아야 할 모든 것
Интервью с экспертом: Анджела Инглэнд о том, как делать деньги, занимаясь любимым делом
7 taktik för att konvertera bloggläsare till betalande kunder
Ƙirƙirar takarda don NGO din WordPress
9 최고의 Kaca badarat na Naon Tiasa Anjeun Diajar tina eta
30 eksperti, kā iegūt vairāk Twitter sekotāju
Soo bandhigida HostScore.net – Habka Cusub, Xogta-Daran en Loogu Talagal in Loo Doorto Martigaliyaha Websaydh
Yadda za a shigar da Google a cikin 워드 프레스
Blogging mo nga 인형 : 나를 괴롭히다 블로그 Ka angitu i te 2020
12 тачака по корак за уписом вашег првог курса на мрежи – И део
Kodowanie dla dzieci: Programowanie Scratch
Kako kreirati Galeriju obraz w Post-u na WordPressu
15 практичних савета за побољшање, промоцију и повећање промета на вашем блогу данас
개인 블로거가 틈새 블로거로 전환 할 수있는 9 가지 방법
Virtuālais privātais tīkls (VPN): Tari-dalana tena tsara ho an’ny mpanaradia
Blogging pentru manechine: Cum să începeți un blog de succes în 2020
5 beste kalenderplugins for WordPress
9 WordPress-codes om uw blog op te fleuren en UX te verbeteren
Google SEO Og MyBlogGuest-saken – På tide å returnere rollene!
Ingqungquthela yewebhu 2014 – УкуХутшва, Изико ЗеСомломо Эзибалулекилео, iPITCH, куние не-стартапов
My Bochum Akụkọ: Revisão de Ogbe ndịda
سه راه آسان برای ایجاد یک وب سایت: راهنمای گام ب هام
Blogga pikeun Dummies: Kumaha Ngawitan Blogg Sukses dina 2020